मेडिकल लिटरेचर मेला – Health Post Nepal
२०७७ जेठ २५ गते | Sunday, 07 Jun, 2020
एमबिबिएस अध्ययनरत साहित्यप्रेमी विद्यार्थीको पहलमा यस वर्षको दुईदिने मेडिकल लिटरेचर मेला चितवनको सौराहामा शुक्रबार सुरु हुँदै छ । सौराहाको थारू कल्चर हाउसमा शनिबारसम्म मेला चल्नेछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा एमबिबिएस अध्ययनरत साहित्यपे्रमी विद्यार्थीको पहलमा मेडिकल लिटरेचर मेलाको सुरुवात गरिएको आयोजकको भनाइ छ । गत वर्ष काठमाडौंबाट सुरु भएको मेला यसपटक मेडिकल हब भनेर चिनिने चितवनमा गर्न लागिएको कार्यक्रम संयोजक विशद दाहालले जानकारी दिए ।
देशका विभिन्न दिग्गज साहित्यकारहरूका साथै साहित्यको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय चिकित्सकहरूको उपस्थितिमा चिकित्साको सेतो रङमा साहित्यको निलो रङलाई जोडेर जीवन र जगत्सँग हरियो संवाद गर्ने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको संयोजक दाहालले बताए ।
चिकित्साको सेतो रङमा साहित्यको निलो रङलाई जोडेर जीवन र जगत्सँग हरियो संवाद गर्ने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको संयोजक दाहालले बताए । चिकित्साक्षेत्रमा लागेर पनि साहित्यमा रुचि भएका चिकित्सक तथा विद्यार्थीबीच मेलामा अन्तरक्रिया हुनेछ । साहित्यमा रुचि हुँदाहुँदै पनि बेफुर्सदिलो चिकित्सा पढाइ तथा अभ्यासका कारण साहित्यको रसास्वादन र सिर्जनाबाट वञ्चितहरूका लागि मेलाले सघाउ पुर्याउने बताइएको छ । विशेषगरी मेडिकल विद्यार्थीको उल्लेख्य उपस्थितिको आशा गरिएको मेलामा सहभागीलाई साहित्यको माध्यमबाट किताबभन्दा बाहिरको सामाजिक, सांस्कृतिक, काव्यिक पाटोबारे जानकारी दिन सकियो भने त्यसले सिकाइ प्रक्रियामा राम्रो प्रभाव पार्ने कार्यक्रमका सल्लाहकार डा. जीवन क्षेत्रीले बताए ।
‘चिकित्सा जीवनमा साहित्यको सार’ नारा दिइएको मेलाबारे जानकारी दिँदै क्षेत्रीले चिकित्साक्षेत्रमा लागिरहेकाको चौतर्फी विकासको दायरा फराकिलो बनाउन मेलाले सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा देशका विभिन्न दिग्गज साहित्यकारहरूका साथै साहित्यको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय चिकित्सकहरूको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया हुने बताइएको छ । कार्यक्रम सेसनमा फरक–फरक वक्ता तथा प्रस्तोताद्वारा विभिन्न विषयमा अन्तरक्रिया चलाइने आयोजकले बताएको छ । कार्यक्रममा सांगीतिक प्रस्तुति पनि रहनेछ ।
मेलामा पहिलो दिन (शुक्रबार) कलाकार यमन श्रेष्ठ र अस्मिता अधिकारीको सांगीतिक प्रस्तुति रहनेछ । कार्यक्रममा स्वस्थ हुनुको मूल्यबारेको अन्तरक्रिया सेसनमा हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, बनिता खनाल वक्ता रहनेछन् भने त्यस सेसनको सहजीकरण डा. रवीन्द्र समीरले गर्नेछन् ।
त्यस्तै, अर्को सेसनमा ‘स्वास्थ्य र शिक्षा कसको ?’, ‘चिकित्साबाहिरको स्वास्थ्य’, ‘डाक्टर हुनुको अर्थ’, एजेन्डामा डा. रामेश कोइराला, डा. सरोज धिताल र जीवन क्षेत्रीको बहस रहनेछ । ‘सत्याग्रह’ विषयमा हरि शर्माको वक्तृता रहने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा आख्यानमा पात्रको छनोट विषय सेसनमा नयनराज पाण्डे, अमर न्यौपाने वक्ताका रूपमा छन् भने प्रस्तोतामा सुविन भट्टराई रहनेछन् ।
काव्यशाला विषय संवादमा लक्ष्मण गाम्नांगे, नीरज भट्टराई, सुवास प्याकुरेल, भूपिन खड्का, सुलोचना मानन्धर डा. कृष्ण पौडेल, सुरेन्द्र अस्तफल, एलबी क्षेत्री, सुमन घिमिरे, प्रकाश चापागाईं, डा. ढुण्डीराज पौडेल, डा. सुशील अधिकारी, डा. सन्तोष पोखरेल रहनेछन् ।
दोस्रो दिनको मेलामा ‘संघर्षका सिँढीहरू’ सेसनमा वक्ताका रूपमा डा सुधा शर्मा, विष्णु विष्टको प्रस्तुतिमा डा. सुमन आचार्यले सहजीकरण गर्नेछन् । त्यस्तै, ‘दुर्गमका डाक्टर’ विषयमा डा. सुमन कर्माचार्य, डा. समीर लामा वक्ताका रूपमा रहनेछन् भने सहजीकरणकर्ता डा. जीवन क्षेत्री रहनेछन् ।
त्यस्तै, अर्कोे सेसनमा ‘डाक्टरका पिता’ विषयमा खग्रेन्द्र संग्रौला, नारायण ढकाल वक्ताका रूपमा रहनेछन् भने डा. सुवास प्याकुरेलले सहजीकरण गर्नेछन् । कार्यक्रमको अन्तिम सेसनमा ‘डाक्टरले किन लेख्ने ?’ विषयमा डा. सरोज धिताल, डा. रामेश कोइराला, डा. रवीन्द्र समीर वक्ताका रूपमा रहनेछन् भने सहजीकरण लक्ष्मण गाम्नांगेले गर्नेछन् ।
Posted in खुसी, मुख्य खबरTagged डा. जीवन क्षेत्री, मेडिकल लिटरेचर मेला, विशद दाहालLeaveaComment on शुक्रबारदेखि सौराहामा ‘मेडिकल लिटरेचर मेला’, ‘चिकित्साको सेतो र साहित्यको निलो रङ जोडेर हरियो संवाद’